Maxaa saldhig u ah xariirka ka dhexeeya Somalia iyo dawladaha shisheeyaha? – Radio Daljir
Maarso 18, 2018 12:17 g 0
Dalka Somalia ma waxuu ka koobanyahay laga bilaabo Saylac ilaa iyo Raas Kaambooni, mise waxuu ku egyahay Xamar?
Shacabka Soomaaliyeed, ma inta ku nool Xamar kaliya ayaa xaq u leh in ay helaan taageero shisheeye mise dhamaan meel uu joogaba xaq ayuu u leeyahay in uu helo taageero shisheeye?
Waxaad moodaa in ayadoo ujeedooyin badan laga leeyahay si waaqaca iyo xaqiiqada ka fog loo adeegsanayo mediaha ayadoo lagu daboolayo daah been ah oo ah wadan jacayl iyo Soomaalinimo. Sidaynu uula socono dhamaanteen dalkeena Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal sokeeyo oo sababay burbur badan iyo kala guur qof walba uu ku laabtay xaafadii uu asal ahaan uuga soo jeeday.
Dawladii Soomaaliya intii ay jirtay waxay ahayd dawlad madax ka nool ah oo wax kasta ay ku xiranyihiin Caasimada. Dhamaan shacabka Soomaaliyeed, ma heli jirin services kii ay u baahanyihiin oo asaasiga u ah nolasha aadanaha; sida caafimaadka, tacliinta, cadaalada, dhisamaha, ganacsiga iyo in kale oo badan. Taas oo keentay in dhamaan tacabkii umada Soomaaliyeed mid dawldeed iyo mid gaar ahba uu ku ekaa Xamar oo kaliya. Waxuu ku khasbanaa qof kasta oo Soomaali ah oo intaa aan sheegnay u baahan in uu Xamar iska xaadiriyo hadii kale baadiyaha bahalku ku cuno.
Markii dagaalkii sokeeye dhacay waxuu sababay kala carar iyo guryo noqod, taas uu dhib aad u badan kasoo gaartay dadkii aa nasal ahaan kasoo jeedin xamar laakiin ku dhaqmay oo ku dhashay oo aan aqoonin meel aan Xamar ahayn, sidaan u sheegnayna aysan jirin meel nolol ka jirto oo aan ahayn caasimada. Dadkaas waxaa ku baryey waa cusub oo aad u xanuun badan. Laakiin dhib kasta oo dhacda positive ayey leedahay hadii si fiican looga faaiidaysto.
Hadaba faaiidada kaliya oo laga helay dagaalkii sokeeye ayaa ah in nolol laga sameeyo gobaladii iyo dagaamadii horay looga guuray oo maamulkii iyo shacabkiiba dayaceen. Taas waxay keentay in qof kastaa tuuladiisii uu ka aasaaso nolol hor leh oo cidina ku taageerayn ayagoo kaashanayo Ilaahii waynaa kadibna awoodiisa intii rabto ha gaarsiisee. Hadaba dhibkaas maxaa laga bartay?
Waxaa loo haystay in dadkii ilbaxay oo daruustii dakaalka sokeeye laga faaiidaystay oo la ogaaday in aan dal hal magaalo oo kaliya ah in uusan umad dhan kaafin Karin, laakiin waxaad moodaa nasiib daro in dariiqii wali la hayo iyo mid kasii daran oo si aad u fool xun loo adeegsanyo saxaafada si dalka mar labaad loogu soo celiyo maamulkii foosha xumaa oo qarniyaalka dib u celiyey umada Soomaaliyeed.
Example, deeqahii shacabka Soomaaliyeed lagu soo kabaayey waxaa la sharciyeey in dalkii Xamar wax ka qabta la dhahaayo shacabka Soomaaliyeed ayuu saaxiib la yahay, dalkii meel kale wax ka qabtana la dhahaayo shacabka Soomaaliyeed ayuu cadaw u yahay!!!. Waa wax aad loola yaabo in aan laga faaidaysan dhibaatooyinkii lasoo maray maamul iyo shacab intaba.
Hadii aan usoo laabto mawduuca hada ka taagan saaxada Soomaalida oo ah dalalka Imaaraadka iyo Turkiga oo labaduba lug ku leh ama faragalin arimaha siyaasada ee dalka Soomaaliya. Laba dal ayaa uugu dhaqdhaqaaq badan dalalka muslimka ah oo ku lug leh siyaasada Soomaaliya. Mid waxaa lagu safeeyey in uu yahay badbaadiyihii dadka iyo dalka Soomaaliyeed, midna waxaa lagu safeeyey in uu yahay cadawgii dadka iyo dalka. Waxaa is waydiin leh ma sidaas ayaa xaqiiqadu mise waxbaa ku hoos jira? Aragtidayda gaaban waxaan u arkaa in aysan arintaas sidaa dadka loogu sheegay oo campaign kaas xoogan loo isticmaalay aysan ahayn ee waxyaalo badan ku hoos jiraan dadka Soomaalinimda jecel oo u hiloobay in ay dawlad Soomaaliyeed helaana loogaga faaiidaystay dacaayado been ah.
Dawlada Turkigu tan intii ay dalka Soomaaliya soo gashay hal meel ah xataa waab kamay dhisin oo aan ahayn magaalo madaxda Mogadisho oo ahayd meeshii horay hantadii nus qarniga dalku xorta ahaa kaligeed la galiyey.
For example, safiirkii u fadhiyey dalka Turkiga Soomaalia mudo 3 sano ka hor ah, waxuu booqasho ku yimid magaalo madaxda dawlad goboleedka Puntland, waxuu dhagax dhigay skool farsamada gacanta ah oo balan qaaday in ay sanad gudihiis ku dhisayaan iyo mashaariic kale oo badan oo uu balan qaaday. Nasiib daro dhagaxii Meesha uu dhigay ayaa uugu danbeeyey hal shay oo kalana kama qaban. Puntland waa dalka uugu balaaran gayiga Soomaaliya ugu yaraan shan malyan oo qofna ku nooshahay. Sidaas oo kale dhamaan gobolada kale oo dalka hal meel ah maalin wax kama qaban.
Dhinaca kale Imaaraadku waxuu mashaariic badan haba iska tabar yaraadaan uu ka wadaa Puntland iyo Soomalilaand. Ciidamada bada ee Puntland oo xeebta dhererkeedo yahay 960 Kilo meters ilaalisa asagaa kharashkooda bixiya. Waa isha kaliya oo dhamaan umada Soomaaliyeed ka ganacsato oo xariir soo jireen ah la leedahay. Waxaa lagu sheegay cadawgi Soomaaliyeed waayo dalka oo dhan ayuu fiirshay ee hal meel ah ma dhihin ayadaa dalka oo dhan matasha.
Dawladii Xamar joogtay oo aan hal maalin ah kula talin saaxibkood Turkiga in uu il naxariis leh ku fiirsho dalka intiisa kale; waxay u aqoonsadeen halkii dal oo asagu dareemay in Soomaaliya Xamar ka wayntahay in lagu sheego cadaw soomaaliyeed!!!. Waa exploitation aad u fool xun oo laga faaiidaysanyo qalbiga fiican iyo soomaali jacaylka shacabka Soomaaliyeed ayadoo la marin habaabinayo ujeedooyinka wax ku oolka ah oo dalka wax looga qaban lahaa, lana doonayo in burburkii laga soo kabsaday dalka dib loogu celiyo lana xaasidayo gobalada ayago gacantooda ku dhistay baahiyahii asaasiga ahaa ayagoo aan sidii aan horay u sheegay Ilaahay maahee aan maamul wax kasoo gaaray jirin, ayadoo waxii aduunku u gartay dadka iyo dalka Soomaaliya hal meel ah lagu ekeysiiyey.
Waxaan kula talinayaa shucuubta iyo maamulada dalka ka jira, in uusan dariiqa Soomaalinimado marin burburinta gobaladooda iyo ka tanaazulka xaqooda. In uusan dariiqa Soomaalinimado marin in kii ayaga wax qabta am raba in uu wax u qabto lagu sheego cadaw, kii dhagaha ka furaysta oo caasimada dhisana la oranayo waa badbaadiyihii Soomaaliyeed. Taas waxaa lagu sheegi karaa afka qalaad “credulity” umad daciif ah oo waxii loo sheegaba rumaysata aana kala aqoon ka maslaxadooda wada iyo kan maslaxadooda ka soo hor jeeda.
Qore/ Faisal Shire Cali